Ubomi obufihlakeleyo bamaqhawe amaqhawe nguGrégoire Guillemin | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UGrégoire Guillemin Uneminyaka engama-48 ubudala "Ingonyama", uyala ukuvumela ukuthanda kwakhe kobuntwana kuphele kuthe cwaka kwixesha elidlulileyo. Inzululwazi, iintsomi kunye nemidlalo yevidiyo iyaqhubeka nokulawula ebomini bakhe. Izihloko ezijongana nazo zombini ukusukela ngo-1930 ukuya namhlanje kwi Ubugcisa be pop, kwimisebenzi yakhe uya kuba nakho ukufumanisa imisebenzi yakhe yobugcisa kwaye ufunde indlela azibuyisela ngayo kwakhona izitayile ngokulinga ubuchule obahlukeneyo y Umncinci.
Njengomdlali ophambili ekuhambeni kwe Ubugcisa beGeek okanye «Ubugcisa beGeek», uGrégoire Guillemin akaziboni njengegcisa, kunokuba abe «eclectic graphic gamer». Ngelixa nganye yeeprojekthi zakhe ifezekisile impumelelo yamanye amazwe, ezinye zezona zaziwa kakhulu zibandakanya "Ukuzivocavoca kwesimbo" okanye "Ukuzivocavoca ngesimbo" kunye ne "Capsule ezidumileyo" okanye "iiCapsule ezidumileyo". Kwakhona phakathi kwezona zinto ziqokelelweyo zeGrégoire Guillemin "Iimpawu zePop", apho iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ifihlwe inkcubeko ye-pop, kodwa inemibala emininzi kunye ne-steam, inika ubomi kumaqhawe ethu abathandekayo njengoko sikubeka kule nto igalari. Emva koko sikushiya igalari yemisebenzi yakhe enomxholo esihlomla kuwo, ndiyathemba ukuba uyabathanda.
Fuente [UGrégoire Guillemin]
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ubomi obufihlakeleyo bamaqhawe amaqhawe nguGrégoire Guillemin
UCesar Cuesta sitsho
Ngaba uyazi igama lefonti esetyenziswe kwi-UI ye-Batman Vs superman?
Phendula César Cuesta
UCesar andimazi, ndiyaxolisa.